फेसबुक र इन्स्टाग्रम इतिहासमा नै सबैभन्दा लामो समयको लागी बन्द ! किन यस्तो भयो – Kathmandu Daily
फेसबुक र इन्स्टाग्रम इतिहासमा नै सबैभन्दा लामो समयको लागी बन्द ! किन यस्तो भयो
अन्तिम पटक फेसबुकले यस परिमाणको अवरोध गरेको थियो 2008 मा, साइटमा 150 एम प्रयोगकर्ताहरू – आज 2.3 बिलियन मासिक प्रयोगकर्ताहरु भन्दा तुलना।
फेसबुकको मुख्य उत्पाद, यसको दुई सन्देश अनुप्रयोगहरू र छवि-साझेदारी साइट Instagram सबै प्रभावित भए।
अवरोधको कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
“हामी सजग छौं कि केही व्यक्तिहरू अहिले अनुप्रयोगहरूको फेसबुक परिवार पहुँच गर्न समस्यामा छन्,” फेसबुकले एक बयानमा भन्यो।
“हामी यो चाँडै सकेसम्म मुद्दा समाधान गर्न काम गरिरहेका छौं।”
अन्य सोशल सञ्जालहरूमा पोस्ट गरिएको अफवाहहरूको प्रतिक्रियामा, कम्पनीले बताएअनुसार आउटसोर्स सेवा आक्रमणको वितरित अस्वीकारको परिणाम थिएन, जसलाई डीडीओएस भनिन्थ्यो – एक प्रकारको साइबर-आक्रमणको रूपमा लक्षित लक्ष्यमा यातायातको अत्यधिक मात्रामा यातायात सेवा समावेश गर्दछ।
यो समस्या कस्तो छ?
अनुमानहरूले यो सुझाव बुधबार बुधबार 16:00 GMTको सुरु भयो।
जबकि फेसबुकको मुख्य सेवा लोड गर्न देखा पर्यो, प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गर्न सक्षम भएन।
इन्स्टाग्राममा भएका व्यक्तिहरूलाई फिड ताजा गर्न वा नयाँ सामग्री पोस्ट गर्न सक्षम भएन। फेसबुक मेसेन्जरको डेस्कटप संस्करण लोड भएन – तर मोबाइल एप केहि सन्देशहरू पठाउन अनुमति दिइयो; तथापि, प्रयोगकर्ताले अन्य प्रकारका सामग्रीहरू जस्तै glitches रिपोर्ट गरे जस्तै छविहरू। व्हाट्सएप, फेसबुकको अन्य सन्देश अनुप्रयोग, यस्तै समस्या थियो।
तेस्रो-पक्षको निक्षेप नक्शाले समस्या समाधान गर्यो सुझाव – DownDetector प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्य सेवाको हानिको बारेमा उल्लेख गर्ने अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा पोष्टहरू।
मुद्दाले फेसबुक कार्यस्थललाई पनि प्रभाव पारेको छ, कम्पनीहरू इन्टरनेटले इन्टरनेटमा सम्पर्क गर्न सेवा प्रदान गर्दछ।
ब्यूनस आयर्समा आधारित डिजाइनर रिबेका ब्रुकोकले बीबीसीलाई बताए कि अवरोध उनीहरूको काममा महत्त्वपूर्ण प्रभाव भएको थियो।
“व्यक्तिगत प्रयोगका लागि फेसबुक ठीक छ – तर के हुन्छ जब हामी ठूलो सेवाहरूमा यस्तो व्यापारिक सेवा प्रदान गर्न चाहन्छौं?” उनले भनिन्।
“म न्यूयर्कमा मेरो टोलीसँग कुराकानी गर्न खोज्दैछु। फेसबुक कार्यस्थान ईमेलको अपवादको साथ [कुराकानी] को लागि हाम्रो मात्र च्यानल हो।”
यूकेमा, एनएचएस बालबालिका सल्लाहकार बीबीसीले बताएअनुसार 20 वर्षपछि भर्खरै भर्ती भएको एक प्यारे नर्सको लागि पार्टीमा कसरी काम नगर्ने अप्ठ्यारो छ।
“एक दिनको काम गर्दै जाँदा धेरै सल्लाहकारहरूले यसलाई बनाउन सक्दैनन्” भनी डा निखिल गंजोले बताए। “त्यसैले मैले उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरे – तर उनीहरूको साथ सेवानिवृत्ति पार्टीको फोटो साझा गर्न असमर्थ हुन्थ्यो।”
युवती अमेरिका मा विधायकहरु को एक राजनीतिक पृष्ठभूमि को बिरुद्ध भइरहेको छ र परे कि किनकी प्रौद्योगिकी प्रविधिहरु – केवल फेसबुक नहीं – टूट जाना चाहिए।
अर्को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवारीको आशा गर्दै एलिजाबेथ वारेनले न्यूयर्क टाइम्सलाई यसो भने: “हामीलाई ठूलो टेक कम्पनीहरुको यो पीडा रोक्न आवश्यक छ कि उनीहरुले आफ्नो पक्षमा नियमहरु को लागी आफ्नो राजनीतिक शक्ति को आसपास फेंकने र फेंकने उनीहरूको आर्थिक शक्तिको वरिपरि बाहिर निस्कन वा हरेक सम्भावित प्रतिस्पर्धामा खरिद गर्न। ”
बुधवारको मुद्दामा, एम ब्रोकरोकले ट्विटरमा थपे: “हेर के हुन्छ जब हामी कम्पनीलाई सबै कुरामा नियन्त्रण गर्न दिनेछौं।
“मैले सोचेँ कि यो अन्ततः हुन सक्छ तर यो एकाधिकारको भाग अत्यन्तै कम छ।”
प्रतिक्रिया के हो?
फेसबुक र इन्स्टाग्राम डाउन भएको बेला धेरैले चहलपहल गर्न चुम्बन गर्न ट्विटरमा गएका छन्।
हैशगहरू #FacebookDown र #InstagramDown अब सम्म 150,000 पटक प्रयोग गरिएको छ।
केही फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले “फेसबुक-सेन्ट्रिक” कार्यहरूमा काम गर्ने, प्लेटफर्म प्रयोग गर्न असक्षम हुँदा उनीहरूको डर र संकट व्यक्त गरे।